အတနျးဖျောတှရေဲ့ လှောငျပွောငျခွငျးကို ခံရပွီးနောကျ သူ့ရဲ့နားကို ပလတျစတဈဆာဂရြီလုပျခဲ့တဲ့ ၆နှဈအရှယျကောငျလေး - Lifestyle Myanmar
Home Family အတနျးဖျောတှရေဲ့ လှောငျပွောငျခွငျးကို ခံရပွီးနောကျ သူ့ရဲ့နားကို ပလတျစတဈဆာဂရြီလုပျခဲ့တဲ့ ၆နှဈအရှယျကောငျလေး
အနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးက ကြောငျးသားဘဝရဲ့ အခါးသီးဆုံးအစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈပွီး ကလေးအရှယျ၊ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအပျေါ ဆိုးရှားတဲ့သကျရောကျမှုရှိစသေော အခွအေနတေဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ အနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးက ကလေးတှမှော စိတျကရြောဂါ၊ စိုးရိမျစိတျနှငျ့ ကွောကျစိတျတို့ကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ သကျရောကျမှုတှအေပွငျ အနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးက တခါတရံမှာ အစှနျးရောကျအနိငျကငျြ့မှုနှငျ့အတူ ထိခိုကျဒဏျရာရစခွေငျး ကဲ့သို့သော ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
အနိုငျကငျြ့ခွငျးဟာ မိဘ၊ ဆရာနှငျ့ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူတှေ ပူးပေါငျးအားထုတျမှုမှတဆငျ့ ကြောငျးမြားကနေ နှုတျပဈသငျ့တဲ့ ပေါငျးပငျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
ပထမတနျးကြောငျးသားဖွဈတဲ့ Gage Berger ဟာ သူ့ရဲ့ နားရှကျကားကားကွောငျ့ အတနျးဖျောတှရေဲ့ အနိုငျကငျြ့ခွငျးကိုခံရတဲ့ ကလေးငယျဖွဈပါတယျ။ ကလေးငယျဟာ စိတျဓါတျကလြာပွီး သူ့ကိုယျသူ ကောငျးကြိုးမပေးသူလို့ ခံစားရတဲ့အထိ အမြားကွီး အနိုငျကငျြ့ခံခဲ့ရပါတယျ၊
သူ့မိဘတှဖွေဈတဲ့ Tim နှငျ့ kallie ဟာ တခွားကလေးတှကေ သူ့သားကို လငျးနို့နားရှကျ၊ ဆငျနားရှကျလို့ နာမညျချေါတာကို ကွားခဲ့ရတဲ့အခါ အရမျးဝမျးနညျးခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့သားလေးဟာ မှနျထဲမှာ ကွညျ့ပွီး သူ့နားလေးတှကေို ထပျတလဲလဲ အနောကျကို တှနျးနတောကို မွငျရတဲ့အခါ မိဘနှဈယောကျအနနေဲ့ လကျပိုကျကွညျ့မနနေိုငျတော့သလို ခံစားရပါတယျ။
နောကျဆုံးမှာ သူ့ရဲ့မမေေ ကယျလီဟာ သားလေးနားရှကျတှကေို ပလတျစတဈဆာဂရြီလုပျပေးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ Gageလို ငယျရှယျတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ ပလတျစတဈဆာဂရြီလုပျပေးခဲ့ရတာဟာ ပထမဆုံးအကွိမျမဟုတျဘူးလို့ ခှဲစိတျကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝနျ Dr. Steven Mobley ကဆိုပါတယျ။
ခှဲစိတျကုသမှုက လုံးဝအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ၊ Gageလေးဟာ ခှဲစိတျပွီးနောကျ ပထမဆုံးအကွိမျမှနျထဲမှာကွညျ့ပွီး အံသွခွငျး၊ စိတျလှုပျရှားခွငျးနှငျ့အတူ ‘Oh my gosh’လို့ အံအားသငျ့စှာ ကွှေးကွျောခဲ့ပါတယျ။
ငယျရှယျတဲ့ Gage ဟာသူရဲ့ ခှဲစိတျကုသမှုရလဒျကွောငျ့ ဝမျးမွောကျခဲ့ရသျောလညျး တခြို့လူတှကေ သူ့မိဘတှလေုပျခဲ့တာဟာ မှနျကနျတဲ့ခွလှေမျးမဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ကလေးတဈယောကျကို အနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးကနေ လှတျမွောကျဖို့ သူ့ကိုယျသူ ပွောငျးလဲခှငျ့ပေးခဲ့တာဟာ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးတဲ့ မိဘအုပျထိနျးမှုလို့ တခြို့လူတှကေ ယုံကွညျခဲ့ကွပါတယျ။ မညျသို့ပငျဆိုပါစေ ကလေးလေးအတှကျကတော့ ပြျောရှငျမှုရခဲ့သလို အနိုငျကငျြ့ခံရမှုကနေ လြော့ကနြိုငျဖှယျရှိတာကွောငျ့ ဒီဆုံးဖွတျခကျြကို အမြားစုက ထောကျခံခဲ့ကွပါတယျ။
မိဘရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက မှနျကနျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြလို့ သငျထငျပါသလား? ဒါမှမဟုတျ တခွားနညျးလမျးနဲ့ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးသငျ့တယျလို့ ထငျပါသလား? ကိုယျ့ယူဆခကျြလေးတှကေို မြှဝပေေးသှားပါဦးနျော။
အတန်းဖော်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် သူ့ရဲ့နားကို ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းက ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အခါးသီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကလေးအရွယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ် ဆိုးရွားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိစေသော အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းက ကလေးတွေမှာ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်စိတ်နှင့် ကြောက်စိတ်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေအပြင် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းက တခါတရံမှာ အစွန်းရောက်အနိင်ကျင့်မှုနှင့်အတူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း ကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာ မိဘ၊ ဆရာနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုမှတဆင့် ကျောင်းများကနေ နှုတ်ပစ်သင့်တဲ့ ပေါင်းပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတန်းကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ Gage Berger ဟာ သူ့ရဲ့ နားရွက်ကားကားကြောင့် အတန်းဖော်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံရတဲ့ ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဟာ စိတ်ဓါတ်ကျလာပြီး သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကျိုးမပေးသူလို့ ခံစားရတဲ့အထိ အများကြီး အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
သူ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ Tim နှင့် kallie ဟာ တခြားကလေးတွေက သူ့သားကို လင်းနို့နားရွက်၊ ဆင်နားရွက်လို့ နာမည်ခေါ်တာကို ကြားခဲ့ရတဲ့အခါ အရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားလေးဟာ မှန်ထဲမှာ ကြည့်ပြီး သူ့နားလေးတွေကို ထပ်တလဲလဲ အနောက်ကို တွန်းနေတာကို မြင်ရတဲ့အခါ မိဘနှစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့သလို ခံစားရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ သူ့ရဲ့မေမေ ကယ်လီဟာ သားလေးနားရွက်တွေကို ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Gageလို ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပေးခဲ့ရတာဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဘူးလို့ ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် Dr. Steven Mobley ကဆိုပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုက လုံးဝအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်၊ Gageလေးဟာ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီး အံသြခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အတူ ‘Oh my gosh’လို့ အံအားသင့်စွာ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ Gage ဟာသူရဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုရလဒ်ကြောင့် ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရသော်လည်း တချို့လူတွေက သူ့မိဘတွေလုပ်ခဲ့တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ သူ့ကိုယ်သူ ပြောင်းလဲခွင့်ပေးခဲ့တာဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုလို့ တချို့လူတွေက ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုပါစေ ကလေးလေးအတွက်ကတော့ ပျော်ရွင်မှုရခဲ့သလို အနိုင်ကျင့်ခံရမှုကနေ လျော့ကျနိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများစုက ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မိဘရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ သင်ထင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား? ကိုယ့်ယူဆချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားပါဦးနော်။
Previous articleအစိမျးမစားသငျ့တဲ့ အစားအစာမြား
Next articleကြောငျးသားတှရေဲ့ လေးနှဈစာကြောငျးစားရိတျအတှကျ တက်ကသိုလျတဈခုကို ဒျေါလာ ၅၇.၆ သနျးလှူဒါနျးလိုကျတဲ့ သူဌေးကွီး